Wolf Girl and Black Prince ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
ဇာတ်လမ်းရဲ့အဓိကမင်းသားအဖြစ် Kento Yamazaki ကို Black Prince ပုံစံဖြင့်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. ဒီနာမည်ကြားရင် J-movies fan တွေမသိသလောက်ရှားပါတယ်.. အဓိကမင်းသမီးအဖြစ် Fumi Nikaido ကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်..
manga series အဖြစ်လူကြိုက်များအောင်မြင်ခဲ့သလို live action အဖြစ်ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့ရာမှာလည်းအထူးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ် ...
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအနေနဲ့ကတော့ - အဲရိက ဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာ ... သူ့ကျောင်းကအချစ်ကျမ်းကျေနေတဲ့အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲဝင်ဆံဖို့ ... ချစ်သူရှိတယ်လို့ညာပြောထားပါတယ် ... သူ့မှာချစ်သူရှိတာ သူငယ်ချင်းတွေ တကယ်မယုံမှန်းသိတဲ့အခါ ... သက်သေပြဖို့အတွက် ချစ်သူတစ်ယောက်ရှာဖို့လိုလာပါတော့တယ် ... တစ်နေ့ သူမသောက်နေတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ရှေ့ကနေဖြတ်သွားတဲ့ ကောင်လေးချောချောလေး တစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ... တုံ့ဆိုင်းမနေပဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ အပြေးလိုက်သွားပါတယ်.. ဘယ်သူမှမသိလောက်ဘူး အထင်နဲ့ သူမချစ်သူလို့ပြောဖို့အကြံနဲ့ပါ..(ဒီအခန်းမှာလုပ်သွားတဲ့အကွက်လေးကို အတုယူထားသင့်ပါတယ် 😁) တကယ်တမ်းကျတော့ သူမစီစဉ်ထားသလိုဖြစ်မလာပဲ မထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ....။ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်တော့ အမြန်ဆုံးဒေါင်းပြီးသာကြည့်လိုက်ကြပါ. 😁 အားလုံးသဘောကျကြိုက်နှစ်သက်မယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးပါ ...
Rating အနေနဲ့ကတော့ IMDb မှာ 6.2/10 ရရှိထားပါတယ် ... Rating အရ နည်းတယ်ထင်ရပေမဲ့ လူငယ်တွေကြိုက်နှစ်သက်မယ့် ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုဆိုတာကိုတော့ အာမခံပါတယ်ဗျာ .
Download on V.I.P ( 833MB )
Download on pcloud ( 833MB )
Comedy Japan Manga Romance School
Labels: Comedy Japan Manga Romance School
Hseng Phong October 21, 2016 at 8:44 AM
Why traffic downloading ????
May Thu April 22, 2017 at 8:08 PM
bro open load link နဲ့တင်ပေးပါလား VIP link ကerror ဖြစ်နေတယ် :(